३ जिल्लाका सिडियोको बैठक बस्दै : निषेधाज्ञा अलि खुकुलो हुन सक्ने ! - Kantipath.com
३ जिल्लाका सिडियोको बैठक बस्दै : निषेधाज्ञा अलि खुकुलो हुन सक्ने !
आज काठमाडौँ उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक बस्दैछ । बैठक दिउँसो २ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा बैठक बस्ने ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।
आज बस्ने बैठकमा निषेधाज्ञाबारे थप निर्णय लिने बुझिएको छ । उपत्यकामा पछिल्लो समय लगाईएको निषेधाज्ञा भोली (३१ गते) सकिँदैछ । आज बस्ने बैठकबाट निषेधाज्ञालाई सहज रुपमा पालना गर्दै कसरी अगाडी बढाउँने भन्नेबारे छलफल हुने बताईएको छ । उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई अझै एक साता लम्ब्याईने बुझिएको छ ।
अब थपिने निषेधाज्ञामा पुस्तक ढुवानी र पुस्तक पसलहरु खुल्न सक्ने बुझिएको छ । त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि सावधानी अपनाउँदै केही हदसम्म खुकुलो गरिनेबारे आजको बैठकले निर्णय गर्ने बताईएको छ । अब लुज डाउनमा जान सक्ने मोडालिटीको बारेमा पनि छलफल हुने एक सुरक्षा अधिकारीले बताए ।
Previous Previous post: यौन तस्करीको प्रमुख माध्यम बन्न थाल्यो फेसबुक
Next Next post: संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको मुद्धा सर्वोच्चमा अलपत्र